China TY320-3 Bulldozer Emeputa na Nweta | Xuanhua
TY320-3 bulldozer bụ nkwụsị siri ike kwụsịtụrụ, nnyefe hydraulic, ụdị ụgbọ mmiri na-achịkwa ụdị bulldozer. Mbara ala, nnyefe ikike nnyefe nke bụ Unilever arụ ọrụ. Sistemụ arụmọrụ eji arụ ọrụ dịka mmadụ na igwe na-arụ ọrụ na-eme ka ọrụ dị mfe, rụọ ọrụ nke ọma na n'ụzọ ziri ezi.
TY320-3 bulldozer bụ kwụsịtụrụ isiike, na-enyefe hydraulic, ụdị ụgbọelu na-achịkwa hydraulic. Mbara ala, nnyefe ikike nnyefe nke bụ Unilever arụ ọrụ. Sistemụ arụmọrụ eji arụ ọrụ dịka mmadụ na igwe na-arụ ọrụ na-eme ka ọrụ dị mfe, rụọ ọrụ nke ọma na n'ụzọ ziri ezi. Ike ike, arụmọrụ magburu onwe ya, arụmọrụ arụmọrụ dị elu na nlele anya na-egosi atụmatụ uru. Nhọrọ gụnyere U-agụba, akara aka ise, ROPS na ngwa ndị ọzọ. Ọ bụ nhọrọ gị kachasị mma maka ụlọ n'okporo ụzọ, mmiri hydro-electric, mgbanwe mpaghara, ụlọ ọdụ ụgbọ mmiri, mmepe m na ihe ndị ọzọ.
Dozer: U Ọkara-U Blade
Ọrụ ọrụ (Kg): 34000
Ọrụ ọrụ (Na ripper) (Kg): 38500
Nsogbu ala (gụnyere ripper) (KPa): 0.094
Ihe nlele (mm): 2140
Nkeji nkwụsị ala (mm): 500
Akụkụ Dimkpa (mm): 41301590
Ike ịgba ụra (m): 9.2
Max. Igwu ala omimi (mm): 560
N'ozuzu ya (mm): 688041303640
:Dị: Cummins NTA855-C360
Ike Flywheel (KW): 239
Ọnụ ọgụgụer nke cylinders-borestroke (mm): 6-139.7152.4
Usoro mmalite: Eletrik na-amalite 24V 11kW
Sochie esemokwu: Hydraulic gbanwere
Egwu egwu (mm): 228.6
Gaanụ ihu (Km / h) 0-3.6 0-6.6 0-11.5
Azụ (Km / h) 0-4.4 0-7.8 0-13.5
Max. nrụgide usoro (MPa): 13.7
Mmepụta sistemụ L / min: 335
Nnyefe: Planetary gia, multiple-diski ipigide, haịdrọlik actuated, amanye mmanu site gia mgbapụta, 3 na-atụ gbapụrụ ọsọ na 3 agbara na-agba.
N'iru ipigide: Wet, Multiple diski ipigide, Spring kwajuru, hydraulically Actuated.
Braking ipigide: Wet, breeki breeki, ejikwara na haịdrọlik booster na haịdrọlik n'ijikọta.
Final mbanye: Spur gia, abụọ Mbelata, ikwommiri lubrication.
Nke gara aga: TY230-3 Bulldozer
Osote: SHEHWA-360-DTH seperated crawler arịgoro n'elu hydraulic nke na-egwu ala